Maxaa xiga guushii badda iyo xukunkii ICJ? | KEYDMEDIA ONLINE
Maxaa xiga guushii badda iyo xukunkii ICJ?
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa ka dhawaajiyay in arrinka badda uusan wali soo af-jarmin, loona baahan yahay fulinta go’aankii ka soo baxay ICJ.
MUQDISHO, Soomaaliya - Tan iyo markii 12-kii bishan ay Maxkamada Caalamiha ah ee Cadaaladda ICJ ku dhawaaqday go'aanka marin biyoodkii ay ku muransanayeen Soomaaliya iyo Kenya, waxaa kordhayey munaasabadaha lagu weyneynayo arintaasi ee ay dhiganayeen bulshada Soomaalida.
Ra'iisul Wasaaraha Xukuumada Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa ka qeyb galay munaasabad loogu dabaal degayey libinta Soomaaliya uga soo hoyatay dacwada badda, isagoo halkaasina ka jeediyey khudbad dheer oo dhinacyo kala duwan taabaneysay.
Rooble ayaa carabka ku dhuftay in guusha maxkamada helitaankeeda ay ku xigto fulinteeda, taasoo ay muhiim tahay in guddi ka shaqeeya arintaasi loo saaro,waxana uu xusay inuu sameynta guddigaasi uu dadaaal dheeri ah ku bixin doono.
Ra'iisul Wasaaraha ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay muhiimada ay leedahay marin biyoodka Soomaaliya loo xukumay, halkaas oo ah goob kheyraad kala duwan uu ku jiro, waxana uu Rooble tibaaxay in laga fakiro qorshihii si siman looga faa'iideysan lahaa kheyraadkaasi.
Ra'iisul Wasaare Rooble ayaa dhanka kale arin muqadas ah ku tilmaamay adkeynta xiriirka labada dawladood ee Soomaaliya iyo kenya, taasoo sida uu sheegay ay labada dalba ku qasban yihiin, maadaama ay yihiin kuwa daris ah oo ay sohdin ka dhaxeyso.
Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa hadalkiisa intii uu watay, si cad u sheegay in todobaadkan gudihiisa la gudda gali doonna howlaha doorashada aqalka hoose, kaasoo in muddo ah jiitamayey qorshaha bilaabashadiisa.
Ra'iisul Wasaaraha ayaa ugu danbeyntii khudbadiisa ugu mahad celiyey guddigii Soomaaliya uga qeyb galayey dhageysiga go'aanka Maxmakada oo madasha uu khudbada ka jeedinayey joogay, isagoo dadaalkooda ku macneeyey mid taariikhdu xusi doono.